Vehivavy jeans amin'ny lamaody amin'ny elastic elastic - mahazatra, sipa, mainty, manga, manga, ravina, ho an'ny vehivavy bevohoka, ary inona no tokony harahina?
Ireo solontenan'ny firaisana ara-drariny izay miezaka ny mijery ny hatsembohana, fa koa ny mampionona azy, dia hankasitraka ny jeans amin'ny tarika elastic. Ny karazana modely samihafa dia manampy amin'ny fananganana tsipìka isan-karazany, avy amin'ny fanatanjahan-tena mankany amin'ny orinasa.
Vehivavy jeans amin'ny elastic elastic
Anisan'ireo zazavavy manana fangatahana goavana ny jeans amin'ny lamaody miaraka amin'ny tarika elastika, noho ny tombontsoa avy aminy izany:
Tsy hanosika na haniky na inona na inona manerana ny vala izy ireo, noho ny fahafaham-piarovana ny tenany ary tsy hiparitaka mandritra ny hetsika;
Tsy dia mitaona ny tarehimarika izy ireo, na dia amin'ny fiovan'ny lanjany aza, dia tsy miteraka fikorontanana ao amin'ny faritra ao an-kibo izy ireo. Izany dia mitaky ny fahazoana mavesatra, fa miova ihany koa mandritra ny vanim-potoanan'ny fahabangana;
Rehefa mifidy fomba fanao dia zatovo maro no mijanona ao amin'ny dikan 'ny pataloha na hoditra tery . Ao amin'ny modely tsara indrindra, tokony misy tarika elastika ambony, mba tsy hisy ny fitohanana mandritra ny fandehanana;
Misy jeans eo amin'ny elastika ety ambany, izay misy fitongilanana eo amin'ny pataloha, ka ny fandaminana dia mitranga amin'ny tongotra manontolo, fa tsy avy any ambony.
Jeans miaraka amin'ny tandroka manify miaraka amin'ny tarika elastic
Azo atao ny manitsy endrika jeans iray misy tavy ambony amin'ny elastic elastic. Izy ireo dia manavaka ireo toetra mampiavaka azy ireo:
Afeno ny kibay na ny sisiny. Miaraka amin'ireo olana ireo, ny vokatra vita amin'ny loko mainty dia tena hanampy tokoa;
Rehefa misafidy izany dia ilaina ny mandray an-tanana ny halavan'ny pataloha. Azo afafitra izy ireo, amin'ny endriky ny fantsom-panafody, kofehy matevina;
Ny vehivavy manana volom-borona tsy dia tokony hiditra amin'ny modely maitso, dia hifantoka amin'ny fahafenoana. Ho an'ny vehivavy ao amin'ny "plus" lehibe, dia soso-kevitra ny hisafidy ny jeans amin'ny tarika elastika efa tonta na lelavona mitsambikina avy amin'ny lohalika na avy amin'ny hip;
Ho an'ny zazavavy kely, tsy misy famerana manokana amin'ny safidy ny modely;
Ny matevina sy ny poti-paty dia mety ho toy ny singa fiarovan-tena.
Jeans miaraka amin'ny elastic elastic
Iray amin'ireo safidy malaza indrindra ny jeans zauzhennye amin'ny tarika elastic. Misy ny fiovan'ny karazan-javatra toy izany:
vokatra mivantana, izay misy zauzhivanie noho ny toerana misy ny elastic elatra eo amin'ny tongotra. Mety misy ny zipera amin'ny farany ambany na ny môdely dia voafetra ho ny elastika iray ihany;
Ataovy maoderina kokoa ny loko silamo manampy ireo manga manga na mainty mainty miaraka amin'ny tarika elastika, vita amin'ny hoditra;
Afaka misafidy ny pataloha kely ho an'ny vehivavy bevohoka ianao, ny tena zava-dehibe dia tsy manasitrana ny vavony sy ny tongony ny modely, izany dia hanampy amin'ny fomba mahomby hiatrehana ny endriky ny fomba;
Rehefa mifidy modely iray miitatra, miankina amin'ny endrika, tokony hifidy tandroka ambony na ambany.
Jeans fanatanjahan-tena miaraka amin'ny tarika elastika
Ireo tia ny kazhual dia ho tia ny jeans amin'ny vehivavy tsara tarehy amin'ny tarika elastika avy etsy ambany. Misongadina amin'ny endri-javatra toy izany izy ireo:
tsara ho an'ny kiraro akanjo sy fanatanjahan-tena;
Ny modely fanatanjahantena dia azo atao amin'ny lamba na fitaovana maivana;
Ho an'ny vanimpotoam-potoam-pahavaratra, ny jeans maitso maivana amin'ny elastika elastika ambany sy eo amin'ny lava dia tonga lafatra;
Misy variana misy ifandraisany be loatra, na mifanohitra amin'izany, miaraka amin'ny tavy ambany;
Amin'ny maha-fitazonana fanampiny amin'ny fehikibo dia mety ho toy ny tady;
Jereo ireo modely lehibe izay manitatra eo amin'ny andilany sy zauzhivayutsya kely etsy ambany.
Mitaingina jeans ny elatrao
Mba hahafahana manome fahamendrehana sy fahamendrehana ho an'ny silhouette ny tovovavy jambany eo amin'ny tarika elastic dia afaka. Misongadina amin'ny endri-javatra toy izany izy ireo:
Ny tavy dia miavaka amin'ny lanjany ambany, izay ahafahana manao ny vokatra tsy amin'ny fararano-lohataona, fa amin'ny fahavaratra koa;
dia afaka mampiasa ihany koa ny loko manga, fa koa ny karazana karazana hafa;
Ny fitaovana dia miavaka amin'ny elasticité ambony ary mipetaka tanteraka amin'ny tarehiny;
Maro ny karazam-pandrefesana mahavariana, mety ho vokatra ety, mahitsy, tapakila fohy, fohy na nipoaka;
Ho an'ny zavatra sasany, misy tsipiriany momba ny endriny, ohatra, ny singa rovidy, embroidery, appliques.
Jeans mikotrika amin'ny tarika elastika
Azonao atao ny mamorona sary maoderina amin'ny fomba kazhual raha mampiasa jeans lava amin'ny elastic band ianao. Izy ireo dia miavaka amin'ny endrika toy izany:
Ny rora sy ny lavaka dia mety amin'ny halehibe sy ny endrika samihafa, matetika izy ireo dia mifantoka mihoatra ny lohalika ary mifamatotra amin'ny kofehy na matevina;
Misy karazan-tsarimihetsik'ireo singa rovidrovitra nozaraina manerana ny faritra afovoan'ilay lahatsoratra;
Hoavy orana be dia be dia be ny lamosin'ny lamba malemy;
Raha ny lokon'ny loko, dia azo aseho amin'ny fotsy fotsy manga, manga manga, mainty mainty.
Ny jeans amin'ny vehivavy manerana ny elastic elastic
Tena niavaka tokoa ny modely. Izy ireo dia hifanaraka tanteraka amin'ny tompony amin'ny endrika mahafinaritra, ary amin'ny zazavavy kely. Ireo zatovovavy mitovitovy karazana "pear" dia tokony hofafana io safidy io, satria afaka mifantoka amin'ny fihantsonana be loatra. Rehefa misafidy vokatra dia ampirisihina ny hitadidy ireo fotoana toy izao:
Mila mifidy ny akanjo mifanaraka amin'izany izy ireo, tokony halefa eo amin'ny voditongotra, kodiarana na sehatra ny safidy;
Ireo jeans avo amin'ny elastic elastic sy ny tongolobe dia hahita tsara amin'ny tendron-tsoratry ny halavany. Na izany aza, ny tendron-tsofina mipetaka dia tsy misy afa-tsy ho an'ireo vehivavy manana tombo-kavoana;
Ankoatra izany, dia misy karazana kardigiana na karavasy, vita amin'ny loko samihafa.
Jeans sakaiza amin'ny tarika elastika
Iray amin'ireo malaza indrindra ny ankizivavy jeans amin'ny tarika elastika, izy ireo dia ho fanampim-panazavana amin'ny sary amin'ny fomba kazhual. Misongadina amin'ny endri-javatra toy izany izy ireo:
Modely maro no manamarika ny fisian'ny baomba ambany sy ny silhouette maimaim-poana;
Matetika dia misy singa miavaka toy ny ravina sy rovitra;
Ny vahaolana lamaody dia ny manao pataloa kely nipoitra, dia asehony ny kitrokeliny;
Raha ny lamina loko, dia tena samihafa. Mety ho manga manga, manga manga, jeans malaza malaza amin'ny tarika elastika, afaka mijoro amin'ny loko mamirapiratra ianao, mety ho mavokely, maitso;
Ny fehikibo dia afaka manisy tsangotra fingotra eo amin'ny andaniny, raha ny tapany voalohany kosa dia vita avy amin'ny lamba mitovy amin'ny vokatra.
Jeans akondro eo amin'ny tarika elastic
Modely nalaza malaza, izay niverina avy tamin'ny lasa, ny jeans tsy misy zipa amin'ny tarika goavana midadasika, fantatra amin'ny hoe "akondro". Mihamalazo ny feny izy ireo ary mihalava ny tongotra. Ity modely ity dia miavaka amin'ny ankizivavy lava, izay manana tarehy miloko tsara tarehy. Ny "Bananas" dia afaka misafidy ary ireo tovovavy madinidinika miaraka amin'ny tongony marefo, fa ny safidiny tokony hajanony amin'ny pataloha misy loko mainty sy ny halavan'ny paosiny.
Miaraka amin'ny akanjo fitondra amin'ny elastic elastic?
Ny tena manerantany dia ny jeans manga amin'ny tarika elastika, ka azo ampifandraisina amin'ny zavatra maro ao amin'ny garderobe. Azonao atao ny manonona anarana toy izany:
Angamba fanampiana amin'ny endrika t-shirt na kiraro fanatanjahan-tena;
Azonao atao ny mamorona sary maingoka miaraka amin'ny fanampian'ny blouses amin'ny fehikibo henjana sy kiraro na kapa misy kofehy;
Ny sandals, ny espadrilles na ny trano fandevenana tsotra dia mety ho an'ny sary amin'ny fahavaratra, ary toy ny ambony dia tokony hifidy lobaka na akanjo manga vita amin'ny hazavana;
Amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, ireo kapila marevaka, kardigana, sweaters ary sweater dia nofantenana.
Jeans miaraka amin'ny tarika elastika ety ambany
Ny vahaolana manintona tena mahaliana dia jeans miaraka amin'ny elastic elastic on the ankle. Rehefa misafidy ireo fitaovana gardrobe, dia soso-kevitra ny hijerena fotoana toy izao:
Ny vokatra manjono na mivantana mipoitra dia afaka manomboka ny kiraro fanatanjahan-tena ;
Satria ny ampahany ambony dia mametraka T-shirts, tops, hoodies amin'ny endrika fanatanjahan-tena;
Ho an'ny fampisehoana tery, izay asehon'ny jeans avy amin'ny vehivavy miaraka amin'ny fingotra amin'ny vatany, ilaina ny mifidy kiraro kanto, kiraro baolina kiraro, kapa na kiraro eo amin'ny voditongotra, ary ny tendrony dia hozatra izay azo ampitaina amin'ny akora rongony, akanjo misy karazany hafa.
Vehivavy jeans miaraka amin'ny tarika elastika amin'ny fehikibo
Ny olo-malaza sy malaza eo amin'ny solontenan'ny tovovavy tsara tarehy dia vokatra miaraka amin'ny singa fametrahana eo amin'ny fehikibo. Misaotra noho ny fitomboan'ny fampaherezana azon'izy ireo atao amin'ny fitetezana lavitra na eny amin'ny dian-tongotra. Izy ireo dia ho tsara amin'ny akanjo isan'andro. Izy ireo dia mifandraika amin'ny zavatra toy ny garderobe:
Ny akanjo manerantany, mifanentana amin'ny zavatra toy izany, dia ny kiraro, ny jirobe, ny kardinaly lava.
Mba hanafenana ny fehikibo amin'ny elastika, ireo modely ireo dia azo ampifandraisina amin'ny satroka be dia be, panty, T-shirts miaraka amina printy sy kiraro maivana;
Jeans mitambolimbolina eo amin'ny tarika elastic dia mameno tanteraka ireo kiraro, kiraro sy mpandany. Amin'ny ririnina, azonao atao ny maka boots avo elastic, karaoty ugg na boots.
Jeans ho an'ny vehivavy bevohoka miaraka amin'ny tarika elastic
Ao anatin'ireo renim-pianakaviana amin'ny ho avy dia malaza be ny jeans ho an'ny vehivavy bevohoka amin'ny elastika. Amin'ny fanampian'izy ireo dia afaka mahatsapa fifaliana mahatalanjona ianao ary mamorona tsipika mahazendana maro:
Amin'ny fahavaratra miaraka amin'ny pataloha dia afaka manamboatra tafo-tsôsina ianao na boribory amin'ny lamosina;
Ao anatin'ny vanim-potoana mafana dia mendrika ny hiketrika ho an'ny kofehy, kofehy vita amin'ny akanjo sy akanjo mafana;
Ho toy ny akanjo ivelany ianao dia afaka manao akanjo lava miaraka aminà fakana malalaka;
Ho an'ny kiraro, mety ho mpitaingin-tsoavaly, palitao biletà ary kapa eny ambony tokotany . Ho an'ny vehivavy bevohoka, tsy manolo-tena ny manao kiraro amin'ny fehiloha ianao, fa amin'ny lafiny iray, afaka mifidy kiraro amin'ny fehiloha lava be ianao na sehatra mahazatra.
Ahoana no itiavana ny tennis?
Miantsena ao Tenerife
Pork ao amin'ny tanana
Mainty Face Masira ho an'ny Akne
Masoivohon'i Ekoatora ao Belarosia
Ny zanakavavin'i Kurt Cobain dia handoa alim-bolana amin'ny vadiny taloha ho an'ny fiainana mendrika
Inona no nofinofin'ny saribakoly?
Fihetseham-po amin'ny tiroida
Ahoana no hanaovana aloesy amin'ny tantely?
Ahoana ny fisafidianana ny loko misy varavarana anatiny?
Kafe ho an'ny fahavoazana ara-boajanahary - be pitsiny
Blepharitis - ny antony
Hazo fanorenana trano